सिक्किम पुग्यो ‘कबड्डी’ बिवाद, प्रदर्शन रोक्न माग, हल तोडफोड भए त्यसको जिम्मेवारी नलिने ! (भिडियो सहित) – Ap Nepal
सिक्किम पुग्यो ‘कबड्डी’ बिवाद, प्रदर्शन रोक्न माग, हल तोडफोड भए त्यसको जिम्मेवारी नलिने ! (भिडियो सहित)
June 6, 2022 171
पत्रकार सम्मेलनमा पिन्त्सोले भने, यदि रिलिज भएको खण्डमा सबै लामाहरु सडकमा उत्रिनेछन् र हल तोडफोड भए त्यसको जिम्मेवार हामी हुनेछैनौं । उनले फिल्मलाई नहेरिदिन समेत आग्रह गरे । वास्तवमा बौद्ध धर्म र भिक्षुलाई अन्याय भएको छ । यस विरुद्ध सबैले आवाज उठाउनु जरुरी छ, उनले भने, ‘नेपालमा समेत विवाद समाधान हुनुपर्ने हाम्रो आग्रह छ । कबड्डी ४’मा दयाहाङ राईले चित्रण गरेको लामाको चरित्रले सबै लामाको आस्थामा प्रहार गरेको पनि बौद्ध धर्मगुरु पिन्त्सोले बताए । जुन रुपमा लामाको क्यारेक्टर चित्रण गरिएको छ । त्यो पूर्ण रुपमा गलत छ, उनले भने ।
बाँकी तलको भिडियोमा
Prevट्रकको ठक्क ’रबाट अटो चालकको मृ’त्यु , राजमार्ग अव’ रुद्ध ( भिडियो सहित हेर्नुहोस )
Nextवडाध्यक्ष रिजाल महानगरले नसकेको भन्दै आफै फोहोर उठाउन निस्के स’ डकमा
वडाध्यक्ष रिजाल महानगरले नसकेको भन्दै आफै फोहोर उठाउन निस्के स’ डकमा